Blog Consulting | Otu Di na Nwunye
Ị BỤGHỊ IGBE Ị BỤ NDỊ Ọ BỤRỤ NDỊ Ọ BỤ?
Achọrọ ịrụ ọrụ site n'ebe ọ bụla n'ụwa?
MGBE Ị GA-EBE EKWU NDỊ ỌZỌ Gị?
Ka m chebara ...
Ị na-agbanye ya na blog gị, na-etinye ọtụtụ awa n'ụbọchị. Ruo ugbu a, ọ bụghị inweta gị n'ebe ọ bụla.
Ihe ntinye aka gi bu ihe di mma, imewe gi di oke, ma gi ebe nile n'uwa mgbasaozi, ma agịga adịghị ebugharị.
Maka ajụjụ ọ bụla i nwere, e nwere 1,000 gurus agwa gị ndụmọdụ ndị na-emegide, ndị niile na-azọrọ na ha maara ihe ụmụ okorobịa ndị ọzọ na-eme.
Ọ na-adị gị ka ị furu efu otú ị ga-esi wuo otu ụdị nke ị bụ, ozi ịchọrọ ịnapụta, na na-enye gị nnukwu ego ọ ga-akwụ na blog gị.
Ịchọrọ, ozugbo na ihe niile, maka onye ga-egbutu ya ma gwa gị otu esi eme ya n'ezie. Ị chọrọ gbanwee NDỤ gị. Ị chọrọ na-ebi ndụ n'adabereghị, Nke kachasị mkpa, ebe ọ bụ na gut ị mara na a ga-eme ya, ma ị ma ị nwere ike ime ya. Ị na-amaghị ebe ị ga-amalite.
Mee ngwa ngwa gị
Mee aha maka ika gị site n'iji ọtụtụ puku ụmụazụ ejikọrọ na blog gị kwa ọnwa na n'anya ọdịnaya gị.
Kwepụ onwe gị na Race Rat, ma dozie usoro nke gị. Ịmepụta ego n'Ịntanet abụghị ihe dị mma iji bụrụ eziokwu, ọ bụkwa ihe i nwere ike ime!
GỊNỊ ONE GỊ NA-arụ
Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-anọ ọtụtụ afọ na-ala n'iyi na ihe efu na-enweghị isi. Mee ihe kwesiri ime iji wuo azụmahịa - ziri ezi site na mmalite.
Chọpụta mgbe, ebe, na otu esi esi eme azụmahịa gị. Debe iwu nke aka gị. Mee ya ụzọ gị. Bie ndụ nke aka gị.
Anyị malitere ịde blọgụ na 2016, ebe ọ bụ na mgbe ahụ, ịghọla azụmahịa na-atọ ụtọ na nke bara uru nke na-enye anyị ohere ime ihe anyị hụrụ n'anya, ịga ụwa - ma kwụọ ụgwọ.
Anyị na-arụ ọrụ na bọọdụ njem, ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị, nnukwu ụlọ ọrụ ndị njem na-elekọta mmadụ, na ụlọ ọrụ dị iche iche na-ejegharị ejegharị n'ụwa nile.
Site n'iji ihe anyị mụtara, anyị emeela ka ọmụmụ ihe mmụta dị mkpirikpi maka ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọ ụzọ kachasị mma iji wulite ọnụnọ ha, ika, na azụmahịa. Ụmụ akwụkwọ anyị si n'ofe ntanetị na - abịa - site na njem na nri nsị iji nweta ego, enyemaka onwe onye na ndị ọzọ! Ọ dịghị mkpa ihe blog gị banyere - ụkpụrụ nke ịmepụta blog na-aga nke ọma bụ otu, anyị nọkwa ebe a iji kụziere gị ụkpụrụ ndị a!
Ị GA-EME Ụtọ
Anyị malitere blog anyị enweghị ihe ọ bụla banyere WordPress, blogging, ma ọ bụ ahịa n'ịntanetị. Anyị malitere site n'otu akụkụ, dịka gị - ma kwe gị nkwa na ihe ịga nke ọma nwere ike ime.
Anyị malitere ịntanetị site na ntinye ego nke ego ole na ole maka nhazi. Ịkwesighi ịba ọgaranya iji wuo blog nke ọma nke na-eme ka ego - ị dị mkpa ịmara igodo nke ịga nke ọma!
Ị BỤGHỊ BỤ Onye na-eme ka onye na-ekwu okwu banyere ya
Onye ọ bụla nwere akụkọ nwere ohere ịkọ akụkọ ahụ, ọ dịghịkwa mkpa ọ bụrụ na ịnweghị ahụmahụ dịka onye edemede, onye na-ese foto, ma ọ bụ onye na-ede blọgụ.
Ọ gaghị abụ ihe ezi uche dị na ọrụ nke "nnwere onwe" chọrọ ka ị kwụsị inye nchebe ka ọ mee, ọ ga-eme? Ịmepụta azụmahịa nwere ike ime n'ụlọ, n'oge oge gị - mgbe ọ bụla i nwere ike ime ya.
Eziokwu bụ, ị nwere ike iji ọtụtụ afọ (dị ka anyị mere) weeding site na ozi rụrụ arụ sitere na iche iche isi mmalite online - na n'ikpeazụ ọ dịghị ebe ọ bụla. Ị nwere ike ịchecha isiokwu, lee vidio, ịzụta akwụkwọ, ma mee ihe niile anyị mere ma eleghị anya, naanị enwere ike wepụta ya. Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-ebu ụzọ hapụ, na-eche na nrọ nke ịga ahịa azụmahịa na-aga nke ọma bụ ihe ha na-emeghị ka ebibie ha.
Anyị maara, n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka anyị kwụsị ọtụtụ oge.
Kama nke ahụ, ụzọ anyị dị mfe. Anyị na-elekwasị anya na ọrụ, ma bechapụ mkpọtụ nke ihe dịka ihe atụ efu, na-ebugharị okporo ụzọ na-ezighị ezi maka ịzụ ahịa-na, na-ekiri ihe ngosi nke saịtị. Anyị na-eji ụkpụrụ ndị ahụ ọrụ - ọ bụghị ndị na-ewu "blọọgụ ndị mara mma" nke na-adịghị atọghata, adịghị achụpụ okporo ụzọ, ma ghara inyere gị aka imezu ihe mgbaru ọsọ gị.
Ọ dịghị mkpa ebe ị nọ na njem ntinye akwụkwọ gị - ma ị na-eche na ị ga-amalite, ma ọ bụ na ị na-echegharị ruo ọtụtụ afọ n'enweghị ihe ịga nke ọma. Anyị na-elekwasị anya na ịmepụta ntọala nke nwere ike ịdaba, ma nyere gị aka meziwanye uto nke blog gị na azụmahịa gị.
Kwụsị ịtụ egwu. Kwụsị oge oge. BỤBỤ BỤRỤ REAL MGBE.
Dị njikere ịrụ ọrụ ọnụ?
Anyị na-eme mkparịta ụka oge awa n'elu Skype ma ọ bụ bia (ọ bụla ịchọtara), ma na-emeghe usoro. Ị na - ewetara ajụjụ ndị ị nwere, nsogbu ndị na - enye gị nsogbu, anyị ga - abanyekwa na gị ozugbo iji nweta blog gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị! Ụfọdụ isiokwu ndị anyị nwere ike ikwurịta bụ:
Ịmepụta aha blog na ika nke nwere ike ịkwado azụmahịa (ị maara na gị aha nwere ike igbu ohere gị tupu i malite?)
Ịkọwapụta niche nke na-enyere gị aka ịchọta ihe ịga nke ọma ngwa ngwa
Ịmepụta okporo ụzọ okporo ụzọ iji nwee ihe ịga nke ọma - malite na otu ụbọchị, ma ọ bụ site na ebe ọ bụla ị nọ na njem ntinye gị. Anyị ga-ele anya ụbọchị 30, ụbọchị 90, ọnwa 6, otu afọ, na ọbụna karịa iji nye gị akara ngosi ịkụ aka iji mee ka ọ nwee ihe ịga nke ọma n'ụzọ!
Ịchọta isiokwu na isiokwu ndị na-ebugharị okporo ụzọ
Ide ede na-eme ka ndị na-agụ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị
Ịchọta ngwaọrụ ndị na-ebelata usoro mmụta gị
Ịkụzi usoro mgbasa ozi na ụzọ dị mkpa, ọ bụghị n'ụzọ na-elekwasị anya na ihe efu
Otu esi ejide mgbasa ozi Facebook
Monetizing gị blog
Iwulite usoro na blog gi nke na enyere aka inweta ego gi na eto ogologo oge
Ịkụzi ụkpụrụ nke ahịa na ahịa
Nhọrọ nhọrọ niile nkeonwe gụnyere 7 ụbọchị 100% ego na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na afọ adịghị afọ ojuju.
N'OGE NDỊ NA-ECHICHE N'OGE
Na-ebi na South Florida, ma ọ bụ na-achọ ịga ebe a n'oge na-adịghị anya? Anyị ga-anọdụ ala n'akụkụ na-arụ ọrụ na blog gị mgbe ị na-agba mmiri n'ime nsogbu ọ bụla ị nwere - gụnyere ihe ọ bụla ị nwere ike ịnweta. Anyị ga-achọpụta na ebe nrụọrụ weebụ gị dị njikere maka iwepụ, ma nye gị map nke ga-enyere gị aka ịmepụta!
Nke a na-agụnye oge 4 nke oge mmadụ, tinyere nsonye 30 nkeji site na Skype ma ọ bụ bia.